डा. भन्छन् शिशुलाई स्त नपा न ग र्न सिकाएको हो, पिडित भन्छिन् क रणीको प्रयास गरेकै हो’ – Namaste Host
March 30, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on डा. भन्छन् शिशुलाई स्त नपा न ग र्न सिकाएको हो, पिडित भन्छिन् क रणीको प्रयास गरेकै हो’
शिशु बालिकालाई जचाउन गएकी २५ वर्षीया महिलालाई दु व्र्य व हार गरेको आ रो पमा शुक्रबार प्रहरीले चि कित्सकलाई प क्रा उ गरेको छ । उपचारका बहानामा यस्तो ब्यबहार गरेको आ रो पमा राजविराजस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा कार्यरत डा. राजन जैसवाललाई प क्रा उ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए ।
उनका अनुसार सोही अस्पतालमा बुधबार जन्मिएकी नन्दकी छोरीलाई उपचार गराउन पुगेकी महिलासँग अस्पतालकै केबिनमा यौ न जन्य दु व्र्य हा र गरेको आ रो पमा डा. जैसवाललाई प क्रा उ गरिएको हो । अस्पतालले समेत तत्कालै डा. जैसवाललाई नि ल म्ब न गरेको अस्पताल प्रशासक राजेश झाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
डिस्चार्ज भएर घर जाने बेलामा आवश्यक सल्लाहका लागि शि शुसहित एकपटक भेट्नु भनेर डा. जैसवालले भनेअनुसार फलो अपकालागी अस्पताल पुगेकी महिलालाई बा लि का जाँच्ने बहानामा आफ्नो पेट सु म्सु म्या एको, सं वेद न शी ल अ ङ्ग छुनुका साथै चलाएको र अन्तमा ब्ला उ जको टाँ क नै खोलेर अ श्लि ल क्रियाकलाप गर्न लागेपछि प्र ति कार गरेको उनले बताएकी छन् ।
डिस्चार्ज भइसकेको अवस्थामा पुर्जामा पुनः केही औ ष धि लेखेर डा. जैसवालले पी डि तका पतिलाई औ ष धि पसल पठाएर केबिनभित्र अ श्लि ल क्रियाकलाप गरेपछि प्र ति कार गर्दा बिरामीका कु’रु’वा र स्वास्थ्यकर्मी जम्मा भएको पी डि तले बताए । डा. जैसवालले भने आफूले शि शु बा लि कालाई आमाले स्त न पा न गराउने तरिका सिकाउन खोजेको बताए ।
पी डि तले शुक्रबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा क र णी र प्रयासको उ जु री दिएकि छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक धमलाले आ रो पि तलाई हि रा स तमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
यो पनि, मुस्ताङ जोड्ने सडक थप दुई दिन बन्द
मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सेवा बन्द हुने समय दुई दिन थपिएको छ । वि स्फो टक प दा र्थको प्रयोग गरेर स्तरोन्नति र विस्तारको काम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा सोमबार बसेको बैठकले चैत १९ गतेसम्म यातायात ब न्द ग र्ने नि र्णय गरेको हो । यसअघि चैत १४ देखि १७ गतेसम्मलाई बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात बन्द गरिएको थियो ।
प्रजिअ पौडेलसहित सुरक्षा र आयोजनाका अधिकारीले सडक निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि समय थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो । उत्तर÷दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रेभिर र कैकुखोला क्षेत्रमा सवारी आ वत जाव त ब न्द ग रिएको छ ।
सडक स्तरोन्नति, बेस बगाउने तथा पहिराका कारण सवारी साधन चल्न नसक्ने र चलाउँदा पनि अत्यन्तै जो खि मयु क्त हुने भ एकाले सम्भावित जो खि म र दुर्घटना रोक्न सवारी आ वा गमन ब न्द गर्नुपरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी अश्विनीकुमार यादवले बताउनुभयो ।
सडक बन्द हुने स्थानबाहेकका ठाउँमा भने सवारी चलेका छन् । यातायात व्यवसायीले सवारी साधन परिवर्तन गरेर गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डको आन्तरिक यातायात सेवामा भने अ सर न पर्ने बताइएको छ । बेनी–जोमसोम ७६ किमी सडक चार प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
प्याकेज नं २ को काभ्रेभिरमा गत पुस १९ गतेदेखि सडक चौडा गर्न शर्मा–गजुरमुखी जेभीले पहाड का ट्ने काम गरिरहेको छ । त्यहाँ एक किलोमिटर ६०० मिटर दूरीमा पहाड काट्नुपर्ने जनाइएको छ । काभ्रेभिर बेनी–जोमसोम सडकको जोखिमयुक्त सडक पनि हो । निर्माण कम्पनीले नेपाली सेनाको सहयोगमा वि स्फो टक प दार्थको प्रयोग गरी सडक चौडा गर्ने काम गरिरहेको छ । यस्तै सोही खण्डको थासाङ–४ कैकुमा पटक–पटक बाढीले सडक ब गाउने र पहि रो जाने हुँदा सडक अ व रु द्ध हुने गर्छ ।